Ny rindranasa 4 tsara indrindra amin'ny Android hifehezana ny fandaniana | Androidsis
Fampiharana Android tsara indrindra hifehy ny fandaniana
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, Tutorials
Volana sarotra ho an'ny mpampiasa maro ny volana Janoary. Mahita ny tenantsika miaraka amin'ny hantsana malaza amin'ny volana Janoary isika, satria taorian'ny fandaniana be dia be tamin'ny Krismasy na ny varotra dia nanjary sarotra kokoa ny manome vola. Tena ilaina ny fananana fandaminana tsara ny kaontintsika. Soa ihany fa afaka manampy betsaka amin'ny fanatanterahana izany ny findaintsika Android.
Azo antoka mpampiasa maro nanapa-kevitra ny hifehy tsara kokoa ny fandaniany amin'ny taona vaovao izy ireo. Noho izany dia mbola eo am-potoana ianao mba hitazomana ny tanjonao fampiharana Android ireo. Misaotra azy ireo fa ho mora kokoa aminao ity. Avy eo avelanay ianao miaraka amin'ireo tsara indrindra.
Ny fampiharana tsara indrindra hifehezana ny fandanianao. Amin'izany fomba izany, ho fanampin'ny fitandremana ny satan'ireo kaontinao dia ho afaka hitantana tsara kokoa ny tenanao ianao. A) Eny, tsy mividy na mandany vola tsy ilaina ianao ary ho afaka hamita ny volana amin'ny fomba tsara indrindra ianao.
2 Ny volako
Izy io dia iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra ao amin'ity sokajy ity. Raha ny tena izy, nahazo mari-pankasitrahana taloha, Google nanome satroboninahitra azy ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra. Hanampy antsika ny fampiharana tazomy amin'ny fomba tsotra ny fibaikoana ny fandaniantsika sy ny vola miditra. Mila miditra amin'ny kaonty amin'ny banky isika ary milaza aminy ny hetsika tianay hotanterahina. Amin'izany no ahafahanao manampy anay mandrindra sy mitantana hoy ny hetsika.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ao anatiny dia tsy misy fividianana, na dia mahita doka aza izahay.
Fintonic | Fitantanam-bola manokana sy famatsiam-bola
Developer: Fintonic Servicios Financieros SL
Momba izany fampiharana hafa mitovy amin'izany izay ny tanjona dia ny hanampy antsika hitantana tsara kokoa ny volantsika. Amin'ny fomba ananantsika mifehy ny fandaniana tsy maintsy hatrehintsika. Araka izany, azontsika atao ny mandamina ny zava-drehetra amin'ny fomba mamela antsika hitahiry sy hahita izay fandaniana tsy misy ilana azy na aiza no ahafahantsika mitahiry bebe kokoa. Ny famolavolana ny fampiharana dia tena tsara ary manamora ny fampiasana azy.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana ary koa doka.
Ireo karazana fampiharana dia mazàna mangataka anao hampifandray ny kaontinao any amin'ny banky, saingy mety tsy tianao izany. Raha mpampiasa tsy te hanao izany ianao dia safidy tsara ity fampiharana ity. Satria mamela anao hitazonana ny fandaniana izany nefa tsy mila mampifandray ny kaontinao. Na izany aza, ianao no mila mampiditra an-tanana ny fandaniana rehetra anananao isam-bolana. Saingy, ny famolavolana dia mahatonga ity asa ity ho tena tsotra ary tsy mitaky fotoana firy hanaovana. Inona koa, asehony anao ny kisary sy ny tatitra maharitra miaraka amin'ny fivoaran'ny fandaniana sy ny toe-javatra misy anao.
La misintona an'ity fampiharana ity ho an'ny Android dia mitentina 2,50 euro. Saingy, ao anatiny dia tsy mahita fividianana na dokam-barotra izahay.
Monefy Pro - Fampiharana amin'ny fandoavana ny vola sy fidiram-bola
Nandritra ny taona maro io iray amin'ireo rindranasa fanaraha-maso malaza indrindra amin'ny tsena. Misongadina indrindra izy amin'ny fananana endrika tsara izay tena sariaka sy mora ampiasaina. Satria ianao manolotra vaovao marobe, amin'ny tranga maro miaraka amin'ny sary. Ka ny zava-drehetra dia tena hita maso ary hahafahanao manana fanaraha-maso sy fomba fijery ankapobeny ny toe-bolanao. Manana koa fampahatsiahivana ka tsy hadinonao ny fandoavam-bola amin'ny ho avy ary soraty ho azy ny fandanianao.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Register Kaody QR
Mint: Araho ny fandaniana, tantano ny teti-bola & mitahiry vola
Ireto fampiharana efatra ireto dia mety hifehezana ny fandanianao. Izy rehetra dia manolotra anao asa mitovy amin'izany, satria izy ireo dia noforonina mba hahitanao raha misy fandaniana azonao sorohina ary hitahiry ary manana ara-bola salama kokoa. Ka nahatanteraka tsara ny iraka nampanaovina azy ireo izy ireo. Ho fanampin'izany, amin'ny ankapobeny dia manana endrika tsara izy ireo izay mahatonga azy ireo ho mora ampiasaina. Izy rehetra dia azo alaina mivantana izao amin'ny findainao Android. Iza amin'ireo fampiharana ireo no heverinao fa tsara indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hifehy ny fandaniana
Nelson GR dia hoy izy:
Tsy manana ny Alzex Personal Finance izy ireo, izay raha ny fahitako azy no tsara indrindra. Izy io dia manana ny fampiharana feno indrindra ho an'ny Smartphone sy PC.
Valiny tamin'i Nelson GR
Hanampy ny Twitter ny safidy hitahiry ireo bitsika hovakiana ao amin'ny fanavaozana manaraka
Fampiharana ratsy indrindra ho an'ny Android